Fientanentanana, ahiahy momba ny fiarandalamby vaovao indrindra ao Japana · Global Voices teny Malagasy
66 km amin'ny lalana ihany no hiasa, manana gara telo monja
Voadika ny 24 Janoary 2022 6:01 GMT
Sarintanin'ny tambajotran-damasinina an'ny JR ao Kyushu nanomboka ny taona 2017. Tsy hita sary ny lalana vaovao shinkansen Kyushu Andrefana, izay mampifandray amin'ny ampahany amin'ny tanàna andrefan'i Nagasaki amin'ny tambajotran'ny fiarandalamby haingam-pandeha hafa ao amin'ny nosy. Sary avy amin'i Nevin Thompson. Lisansa sary: ​​Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Janoary, nandray ny fiaran-dalamby vaovao fandeham-bala (fantatra any Japana amin'ny anarana hoe shinkansen, na super express) an'ny firenena ireo mpankafy lamasinina be fanoloran-tena any andrefan'i Japana. Rehefa nilahatra hitazana ireo fiarandalamby N700S vaovao ireo mpijery satria niala ny orinasa ireo, ny hafa kosa nanontany ny fampiasana ny zotra shinkansen Kyushu Andrefana vaovao, izay mbola vita amin'ny ampahany ihany.
Ity ny shinkansen vaovao any Japana Andrefana (lamasinina fandeham-bala, na super express), ny ‘Kamome’ (voromahery). Ireo tranobe tranainy efa lany andro ao ambadika no mandrafitra ny orinasa Hitachi Kudamatsu.
Efa mandeha amin'ny zotra shinkansen Sanyo sy Tokaido ny fiaran-dalamby N700S izay mampifandray ny nosy Fukuoka sy Kyushu any andrefan'i Japana amin'i Tokyo izay 1.000 km any atsinanana, amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 300 km/ora. Handeha hatramin'ny 265 km/h ao amin'ny lalana vaovao Kyushu Andrefana ny fiaran-dalamby.
Novokarin'ny goavamben'ny injeniera Hitachi ao amin'ny orinasany ao Kudamatsu, Yamaguchi, any amin'ny farany andrefan'ny nosy Honshu, avaratra-atsinanan'i Kyushu ity fiaran-dalamby vaovao ity. Efa toerana lehibe falehan'ireo mpitaingina sy mpitia lalamby ny orinasa Kudamatsu an'i Hitachi, satria amin'ny ampahany dia nandehandeha indrindra nanerana ny tanàna niainga tao amin'ilay orinasa handeha any amin'ny seranana ireo fiaran-dalamby vao vita
Fampidirana ny fiara shinkansen Kyushu Andrefana ho an'ny fitaterana an-dranomasina ao Kudamatsu, Yamaguchi. Halefa any Omura, any Nagasaki, amin'ny sambo manomboka ny 5 Janoary 2022 ny tahirin'entana N700S, novokarina tao amin'ny orinasa Hitachi ao Kudamatsu, Yamaguchi.
Lahatsoratra mifandraika: Fampidirana ny fiara shinkansen Kyushu Andrefana ho any amin'ny fitaterana an-dranomasina ao Kudamatsu, Yamaguchi
Mampanantena hampifandray ny tanàna andrefan'i Nagasaki amin'ny tambajotran-dalamby haingam-pandeha efa misy ao Kyushu ny zotra vaovao shinkansen West Kyushu, miaraka amin'ny “Kamome” (voromahery) N700S, rehefa manomboka ny serivisy amin'ny fararano 2022. Amin'izao fotoana izao, dia mila efa ho telo ora no ilaina handehanana amin'ny lamasinina express voafetra mahazatra mankany Nagasaki somary mitoka-monina avy any Fukuoka, tanàna lehibe ao Kyushu.
Taorian'ny nampidirana ireo fiarandalamby vaovao tao anaty sambo tao Kudamatsu, dia nanohy nanara-maso ny fandrosoan'izy ireo namakivaky ny Ranomasina Anatitany sy nankany amin'ny nosy manodidina an'i Kyushu sy Nagasaki ireo mpankafy fatratra ny fiarandalamby.
Tonga eto ny ‘Kamome’, ilay shinkansen Kyushu Andrefana vaovao!
Ny ‘Kamome’ mandalo amin'ireo tilikambo fampitàna radio Hario ao Sasebo (somary eo akaikin'ny toerana faran'ny fiarandalamby, ao Omura, ivelan'ny tanànan'i Nagasaki ihany).
Tsy nilazaom-pifandirana anefa ny zotra shinkansen Kyushu Andrefana vaovao, izay mampitohy an'i Nagasaki amin'ny tambajotra haingam-pandeha efa misy ao Kyushu, Raha tonga ao amin'ny lalambe ny lalana any amin'ny mihintsan-dravina 2022 any ho any, dia 66 km amin'ilay lalana ihany no hiasa, izay manana gara telo ihany, araka ny Asahi Shimbun. Maharitra 25 minitra monja ny dia amin'ny zotra vaovao haingam-pandeha alohan'ny hifindran'ny mpandeha amin'ny fiaran-dalamby express voafetra kokoa ny hafainganam-pandehany.
Na izany aza, noraisina ho fitaovana famelomana ara-toekarena ho an'ny prefektioran'i Nagasaki ny zotra vaovao, izay misedra ny fitontongana ara-toekaren faran'izay mafy indrindra ao amin'ny prefektiora rehetra ao Kyushu.
Eo anoloan'ny fiantsonan'ny JR Nagasaki tamin'ny volana Aogositra 2019. Noravana ny tobim-piantsonana manontolo, ary naorina avy eo ny fiantsonana shinkansen vaovao. Ny trams dia ampahany amin'ny tambajotran-dalamby jiro elektrika ao an-tanàna. Sary avy amin'i Nevin Thompson. Lisansa sary: ​​Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Amin'ny fanesorana tsikelikely ireo indostria nentim-paharazana toy ny fanamboaran-tsambo, mametraka ny fanantenany amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany i Nagasaki. Amin'izao fotoana izao anefa, mety hahazoana 30 minitra monja amin'ny fotoana fandehanana io zotra vaovao io, no sady mampitombo ny isan'ny fifindrana amin'ny lamasinina sy ny fomba fitaterana hafa.
Sarintanin'ny lalana vaovao shinkansen Kyushu Andrefana (zotra mena) izay manome serivisy mankany Nagasaki. Mbola tsy vita ny lalana, ka mila afindra indray na indroa ny mpandeha vao tonga any Fukuoka (zotra maitso).
Amin'izao fotoana izao, afaka mifindra avy amin'ny zotran-dalamby super-express avy any Fukuoka na koa Tokyo mankany amin'ny tolotra express voafetra hafainganam-pandeha efa misy izay mandeha mivantana mankany amin'ny fitodian'i Nagasaki ireo mpandeha.
Noho ny mbola tsy fahavitan'ilay zotra shinkansen Andrefana, mila mifindra indroa ny mpandeha, na mandeha amin'ny làlana voafetra express lavidavitra kokoa, satria ny West Kyushu shinkansen no hanolo ny serivisy mivantana mankany Nagasaki.
Na izany aza, maro ireo mponina Nagasaki niandry ny handray ireo fiarandalamby vaovao ho any Kyushu ary nandefa ny sariny tao amin'ny Twitter sy ireo sehatra media sosialy hafa.
Mandalo amin'ny manodidina anay ny fiara shinkansen Kyushu Andrefana (vaovao) ‘Kamome'!
Suzukawa Ayako, mpibilaogy YouTube malaza sady mpankafy fiarandalamby, nanao dia nankany Nagasaki niainga tao an-tranony tsy lavitra an'i Tokyo mba hiarahaba ireo fiara shinkansen vaovao.